‘सन्तुष्टिको पूर्णताले अघि बढ्ने क्रम नै रोकिन्छ’ : प्रा.डा. पौडेल « रिपोर्टर्स नेपाल
नाम : प्रा.डा. हेमनाथ पौडेल
पिता/माता : पशुपति पौडेल र कृष्णमाया पौडेल
अध्ययन : स्नातकोत्तर (प्रथम श्रेणी) र विद्यावारिधि (पीएच्डी) समकालीन नेपाली कविता विषयमा
प्रथम प्रकाशित रचना ” ‘सरस्वती वन्दना’ (कविता) विक्रम सम्वत् २०३२
(१)कृष्णमणि साहित्य पुरस्कारद्वारा सम्मानित स्रष्टाहरू (वि.सं. २०६४),(२) भाषा साहित्यका दुई हस्ती (२०६४), (३) प्रगतिवादी दृष्टिमा कवि र कविता (२०६५),(४) सन्दर्भपरक समालोचना (२०७०), (५) भाषा विज्ञान र नेपालका भाषाहरू (२०७०), (६) प्रगतिवाद र कवितासम्बन्धी मान्यता(२०७५), (७) कविता समालोचना (२०७५), (८) नेपाली प्रगतिवादी कविता ः इतिहास र प्रवृत्ति (२०७५),(९) समीक्षा र भूमिका(२०७५), (१०) पारिभाषिक शब्दपरिचय(२०७५),(१०) चिन्तन र संस्मरण (२०७५)(११) लिम्बू जातिमा प्रचलित लोकगीतिनृत्य धाननाच(२०७५) विभिन्न पत्रिकामा भाषा र साहित्यसँग सम्बन्धित दर्जनौं अनुसन्धानात्मक लेख र समालोचना प्रकाशित
प्रकाशनोेन्मुख कृति : एउटा कविता सङ्ग्रह रतीनवटा समालोचना कृति
यहाँको साहित्य लेखन कहिलेबाट सुरु भएको हो ?
साहित्यमा मेरो लेखनको मूल विधा समालोचना हो । निबन्ध, कविता र कथा पनि मैले लेख्ने गरेको छु । लेखनको सुरुवातचाहिँ कविताबाटै भएको हो । वि.सं. २०३२ मा हिमज्योति पत्रिकामा प्रकाशित ‘सरस्वती वन्दना’ कविता र २०३७ मा पिपल पत्रिकामा प्रकाशित ‘कान्छी पाथी’ कथाबाट मेरो विधागत लेखन सुरु भएको हो । यसपछि मैले २०४२ बाट समालोचनामा कलम चलाएको हँु । मेरा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक समालोचनाका तथा निबन्धका गरी एक दर्जन कृति प्रकाशित छन् भने समय÷समयमा लेखिएका कविताको सङ्ग्रह र तीनवटा समालोचना कृति प्रकाशनोन्मुख अवस्थामा छन् ।
मेरो साहित्यिक यात्रा पठनपाठनकै क्रममा अघि बढेको हो । मैले एउटा कुनै निश्चित व्यक्तिबाट भन्दा पनि राम्रा र असल विचार बोकेका स्रष्टा र सृष्टिबाट प्रभाव ग्रहण गर्ने गरेको छु ।
अहिले म नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा पद्य/काव्य विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा छु । त्यो जिम्मेवारीमा रहेर गर्नुपर्ने प्राज्ञिक कार्य– अध्ययन, अनुसन्धान र गोष्ठीमा बढी समय बितिरहेको छ । यसबाहेक आफ्नो लेखन पनि अघि बढिरहेकै छ ।
जे लेखिएको र गरिएको छ– त्यसप्रति त सन्तुष्टि नै छ तर अझै धेरै सृजना र समालोचना गर्न बाँकी छ । पूर्ण सन्तुष्टि भयो भने त अघि बढ्ने क्रम नै रोकिन्छ नि ।
एउटा नेपाली कविताको इतिहास र समसामयिक नेपाली व्याकरणको कृति तयार गर्ने विचारमा छु तर केही समय लाग्छ ।
साहित्य र स्रष्टाप्रति राज्यको गहन जिम्मेवारी हुन्छ । स्रष्टाले सहज रूपमा सृजना गर्नसक्ने वातावरण राष्ट्रले नै बनाइदिने हो । जुन मुलुकमा साहित्य र कलाको विकास भएको हुन्छअनि जहाँ स्रष्टाकोकदरएवं मान–सम्मानहुन्छ–त्यस्तो मुलुकको सबैले इज्जत गर्छन् । राज्यको समृद्धिको सूचकमा भाषा साहित्य र कला पनि पर्दछन् ।
साहित्य समाजको दर्पणमात्र होइन– रूपान्तरणको माध्यम पनि हो । म साहित्यमा वैचारिक लेखनका पक्षमा छु । विचारबेगरको साहित्य हुँदैन भन्ने मेरो विचार छ । त्यसैले म समाजका यथार्थलाई कथ्य विषय बनाई त्यसकोे अग्रगामी परिवर्तन र रूपान्तरणका पक्षमा साहित्य लेखिनुपर्छ भन्ने विचार राख्छु ।
गर्ने र नगर्ने दुवै छन् । लेखक समाजका यथार्थप्रति राम्ररी परिचित हुनुपर्छ र ऊसधैं आलोचनात्मक पनि रहनुपर्छ। आलोचनाका माध्यमबाट समाजका राम्रा/नराम्रा पक्षको उत्खनन गरी राम्रा पक्षको समर्थन र नराम्रा पक्षप्रति प्रहार एवं आलोचना भएन भने समाज अघि बढ्न सक्दैन । समाजलाई अग्रगमनको बाटोमा डो¥याउने काममा राजनीतिलाई साहित्यले सघाउ पु¥याउनुपर्छ अनि मात्र लेखकीय दायित्व पूरा हुन्छ। साहित्य स्वान्तःसुखायको विषयमात्र होइन– समाजको अग्रगमन र परिवर्तनको माध्यम पनि हो ।
साहित्य समाजको उपज भएकाले समयको गतिसँगै यसको सार र रूपमा पनि परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले साहित्यलाई समयसापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ ।
जीवनमुखी, परिवर्तनधर्मी, सहज सम्प्रेषणयुक्त, सन्देशमूलक र अन्तर्वस्तु र रूपका बीच सन्तुलित साहित्य आजको आवश्यकता हो ।
लेख्ने पे्ररणा केबाट प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
जीवन र जगत् नै साहित्य सृजनाको प्रेरक तत्त्व हो । स्रष्टालाई जीवन जगत्का सुरूप र कुरूप यथार्थले संवेदनशील बनाएपछि ऊ त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नतिर लाग्छ ।
म बढीजसो राति सबै सुतेपछि लेख्छु । त्यो समय एकदमै शान्त र लेखनका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
तनाबमुक्त अवस्था, एकान्त र शान्त वातावरण लेख्नका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
सृजनाका निम्ति समाजमा अनगिन्ती विषय हुन्छन् । तीमध्ये जीवनोपयोगी विषयवस्तु पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । मैले चाहिँ बढीजसो आवश्यकता र मागका आधारमा लेखेको छु । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दा पठनपाठनका निम्ति आवश्यक पर्ने सामग्री पनि तयार गरियो भनेअरू बेला स्वतन्त्र अध्ययन–अनुसन्धान र लेखन पनि भएको छ ।
सबैभन्दा बढी लेखिने र पढिने विधा कविता नै हो तर पाठकका निम्ति बढी रुचिकर लाग्ने विधाचाहिँ आख्यान र नियात्रा हुन् ।
सृजनामा यथार्थता र काल्पनिकतामध्ये कुन बढी हुनुपर्ला ?
सृजनामा कोरा कल्पना मात्र भयो भने पनि त्यो जीवनबाट टाढा हुनपुग्छ अनि यथार्थको वर्णनमात्र भयो भने पनि त्यो सृजना नभई कोरा कुरामात्र हुनपुग्छ । त्यसैले सृजनामा यथार्थको फोटोग्राफी होइन– कल्पनाको जलपसहितको प्रतिविम्बन, पुनः सृजन वा पुनरूत्पादन आवश्यक हुन्छ ।
खास सृजना त खास विशेष क्षणमा नै लेखिन्छ । समालोचना, समीक्षा र अनुसन्धानात्मक लेखचाहिँ कसैले मागेका बेला र आवश्यकता परेका बेला बाध्यतामा परेर पनि लेखिन्छ ।
रहरले मात्र होइन– प्रशस्त साधना गरेर विचार निर्माणपछिमात्र लेख्ने गरियो भने त्यो सृजना दिगो र स्तरीय पनि हुन्छ । लेखनमा अरूको नक्कल होइन–आफ्नै मौलिक शैली विकास गर्नु राम्रो हुन्छ ।
किन कोही स्रष्टा दलको झन्डामुनि ओत लाग्ने रहर गर्छन् ?
लोकतन्त्रमा झन्डामुनि ओत लाग्ने कुरा स्वाभाविकै हो नि । झन्डामुनि बसेर जनविरोधी सृजना पो गर्नु भएन त । कला र साहित्य राजनीतिबाट अलग हुन्छन् भन्नु गलत कुरा हो । जसले यस्तो कुरा गर्छ– उसले पनि राजनीति नै गरिरहेको हुन्छ । कोरा राजनीति पो साहित्यमा अस्वीकार्य हुन्छ– विचार त आवश्यक पर्छ नि ।
सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको पुरस्कार र कविता संग्रहको बिमोचन सम्पन्न
काठमाडौं, २८ पुस । सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गत बर्ष आयोजना गरेको बिश्वब्यापी नेपाली कविता
नेताहरूले देश बिगारे
नेताहरूले देश बिगारे म पढेलेखेको र भद्र मान्छे, म संयमित हुनपर्छ बोल्नु हुँदैन मैले लेख्नु
‘म नाङै छु’
:- शुलभ राज बराल तिनिहरु फेरि आउछ्न देशभक्तिको नारा लगाउछ्न आकासमा उडि हिड्ने पन्छी भगाउछ्न
‘चिताको पनि आत्मा हुने रहेछ थाहा भयो’
चिताको पनि आत्मा हुने रहेछ थाहा भयो कैलेकाहीँ इश्वरपनि रुने रहेछ थाहा भयो लाग्थ्याे यो
आमा भुमा देवी बरालको देहावसानले बेलायतस्थित ह्यारिटेज क्विजिन अफ नेपालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बिनोद बराल
सहिद गंगालाललाई सम्झँदै गणतन्त्रकालमा अपहरणमा परेका गंगालाल श्रेष्ठले ल्याए ‘जीवनी भाग–१’ पुस्तक
काठमाडौं, २२ मंसिर । काभ्रेका गंगालाल श्रेष्ठले आफूले पाएको यातनाको घटनालाई समेटेर पुस्तक सार्वजनिक गरेका